Dresden တွင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ခရီးသွားသတင်း
Dresden ဂျာမနီနိုင်ငံသည် Saxony ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလွန်ရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်ပါတယ် ယဉ်ကျေးမှုသငျသညျဖျော်ဖြေပွဲ, choir နှင့်ပြတိုက်န်းကျင်လည်ပတ်တဲ့အနုပညာဘဝကြိုက်နှစ်သက်လျှင်။ ဟုတ်လား? ဒါကြောင့်သူမကိုဖြတ်ပြီးခရီးထွက်ဖို့မထားခဲ့ပါနဲ့ Alemania.
ဒီနေ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Phoenix လိုပြာမှုန်တွေရဲ့ပြာကနေမွေးဖွားလာတဲ့ဒီရှေးဟောင်းမြို့တော်ကိုငါတို့အာရုံစိုက်ကြမယ်
2 Dresden ခရီးသွားလုပ်ငန်း
မြို့သည်ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းကံကောင်းခဲ့သော်လည်းဒုတိယမကုန်မီလေးတွင်ဖြစ်သည် မဟာမိတ်ဗုံးများသည်၎င်း၏သမိုင်းဝင်စင်တာကိုလှည့်ခဲ့သည် ပျက်စီးခြင်း၌တည်၏ ၂၅၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအငြင်းပွားစရာမရှိပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ ၁၉၄၅၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာအဲဒီမြို့မှာမီးတောက်လောင်ခဲ့တယ်။
စစ်ပွဲပြီးနောက်မြို့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏လက်၌ကျန်ရစ်ခဲ့သည်နှင့်ဤအစိုးရလက်အောက်တွင်သမိုင်းဝင်စင်တာကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးကွန်မြူနစ်ဗိသုကာ၏စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်းမြို့တော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်အကြီးအကျယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်၊ Dresden ရှိ Elbe ချိုင့်ဝှမ်းကိုကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ ယင်းသည်ခေတ်သစ်နှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာတံတားတစ်စင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
Dresden အဆိုပါ Elbe ၏ဘဏ်များအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်မြစ်၏ချိုင့်ဝှမ်းတွင်ကမ်းခြေနှစ်ခုလုံးအထိကျယ်ပြန့်သည်။ ၎င်းသည်ဂျာမနီနှင့်စတုတ္ထအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည် ၎င်းသည်ဥရောပတစ်လွှားရှိအကြီးဆုံးစိမ်းလန်းသောနေရာများရှိသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ စူပါယဉ်ကျေးမှုမြို့၎င်းတွင်ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ပြတိုက်များနှင့်တေးသီချင်းများများစွာရှိသည်။ ဒါကြောင့် Dresden ကိုဘာတွေသွားလည်ရမလဲ။ ဘုရားကျောင်း Frauenkircheတိုက်ကြီးတွင်အကြီးဆုံးအမိုးခုံးများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မူလချာ့ချ်ကို ၁၇၄၃ ခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင်လောင်ကျွမ်းသွားသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များ၌ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းမတိုင်မီအထိစစ်ပွဲ၏အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အပျက်အယွင်းများကဲ့သို့ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။
ဤပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်မူရင်းကျောက်ခဲများစွာဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းများ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်ပတ်လမ်းသည်လန်ဒန်တွင်စစ်ပွဲဖျက်ဆီးခြင်းအတွက်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအမူအရာတစ်ခုအဖြစ်အတုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယ၊ သင်သိရန်လိုသည် Zwinger နန်းတော်, ၁၆ ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင် Saxon Elector သြဂုတ်လ ၂ ရက်အားကြီးသောအဆောက်အအုံအားဆောက်လုပ်ရန်အတွက်ဆောက်လုပ်ထားသောလှပသော Baroque အဆောက်အအုံ။
သူကတစ် ဦး အဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည် orangery သို့သော်၎င်းသည်ကြွယ်ဝပြီးအလွန်အမင်းထူးခြားသည့်အဆောက်အအုံများ၊ ဥယျာဉ်များနှင့်ရုပ်ထုများဖြစ်လာသည်။ ဒီမှာလှတယ် အဆိုပါ Nymph ၏စမ်းရေတွင်း, နယ်ပယ်, balustrade နှင့်ရုပ်ထုနှင့်အတူ။ ယနေ့ခေတ်ပြတိုက်များတွင်အများပြည်သူစုဆောင်းထားသည့်ပြတိုက်များနှင့်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် Gemäldegalerie Alte Mesiter အီတလီ၊ ဒတ်ခ်ျ၊ စပိန်နှင့် Flemish Renaissance တို့၏အံ့ဖွယ်စုဆောင်းမှုပါ ၀ င်သည်။
ဒီစုဆောင်းမှုကို ၁၆ ရာစုမှာAugustဂုတ် ၁ ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၇၄၆ ခုနှစ်မှာAugustဂုတ် ၃ ရဲ့လက်ထဲမှာ Duke of Modena ရဲ့စုဆောင်းမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတော်များများကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Rembrant, van Eyck, Titian, El Greco, Zurbaránနှင့် Rubens တို့၏လက်ရာများသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပြခဲ့သော ၇၅၀ လက်ရာများအနက်အများဆုံးစုဆောင်းမှု၏သုံးပုံတစ်ပုံသာရှိသည်။
Dresden အော်ပရာရုံ၊ Semperoper, ၎င်းကို ၁၈၇၈ တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၈၆၉ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယထပ်အဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ နီရိုဘားစ်နှင့်အီတလီ Renaissance စတိုင်လ်တွင်တည်ရှိပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ပျက်စီးခဲ့ပြီး 1878 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဖျော်ဖြေပွဲဒါပေမယ့်လည်းရှိပါတယ် ၎င်း၏လှပသောအတွင်းပိုင်းကိုသိရန်ခရီး.
အဆိုပါ၏ Renaissance နန်းတော် Saxony ၏မဲဆန္ဒရှင်များနှင့်ရှငျဘုရငျတို့နေထိုင်ရာ ၁၆ မှ ၁၉ ရာစုအထိဖြစ်သည် Residenzschloss ။ ယနေ့တွင်၎င်းတွင်ပြတိုက်များ၊ ဘဏ္Chamberာရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ သမိုင်းဝင်သံချပ်ကာနှင့်အော်တိုမန်အနုပညာနှင့်တူရကီခန်းမတို့ပါရှိသည်။
၎င်းတွင် Kupferstich - Kabinett ၌တည်ရှိသည်။ Goya, Michelangelo, Jan van Eyck, Rubens နှင့် Rembrandt, နှင့်Münzkabinett, အကြွေစေ့စုဆောင်းမှုတို့ကဲ့သို့သောအနုပညာရှင်များ၏ပုံကြမ်းများ၊
La အစိမ်းရောင် Vault ကပြတိုက်သို့ကူးပြောင်းတော်ဝင်အခန်းများအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သည်နန်းတော်၏အနောက်ဘက်တောင်ပံ၏ပထမနှင့်ဒုတိယထပ်ကိုယူထားသည်။ ရွှေရောင်၊ ငွေ၊ ပယင်းစသည့်အနုပညာလက်ရာ ၃၀၀၀ ခန့်ကို ၁၈ ရာစုမှပထမထပ်သို့ပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယထပ်တွင် New Green Vault ဖြစ်သည်။ ထူးခြားသောပန်းပဲဆရာ Dinglinger သည်သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင်ခိုင်ခံ့သောလုပ်ရပ်များဖြင့်သီးခြားပြထားသောပြတိုက်ဖြစ်သည်။
နန်းတော်၏အရှေ့ဘက်တောင်ပံတွင်၊ 102 မီတာရှည်လျားကြွေနံရံ။ ဒီနံရံကို ၁၈၇၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာစတင်ပန်းချီဆွဲခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်ကကြွေထည်များဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ Fürstenzurg ၀ တ်မင်း၏အိမ် ၃၅ အုပ်၊ ဒွါဒသမရာစု၏ပြိုလဲခြင်းမှသည်မှူးမတ်များနှင့်orsကရာဇ်မဲဆန္ဒရှင်များမှသည်ကိုးရာစုဘုရင်များအထိသရုပ်ဖော်ထားသည်။
Dresden ၌ကြွေ၏စကားလည်းရှိပါတယ် Dresden ကြွေစုဆောင်းခြင်း, Zwinger နန်းတော်၏တောင်ဘက်ခန်းမများတွင်။ ပြည်နယ်စုဆောင်းမှုကို ၁၇၁၅ ခုနှစ်တွင်သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၈ ရာစုမှတရုတ်နှင့်ဂျပန်ဘဏ္treာများကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ စုဆောင်းထားသည့်ပစ္စည်းပေါင်း ၂၀၀၀၀ ခန့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာပြသထားသည်။
မြို့၏အစိတ်အပိုင်းကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားသောရှုထောင့်မှကြည့်ပါ Brühlကျန်ကြွင်းသောနေရာဘုရားကျောင်းမြောက်ဘက်။ က မြင်ကွင်းကျယ်ကျန်ကြွင်းသောအရပ် သြဂတ်စနှင့်ကာရိုလာတံတားများအကြားညာဘက်ခြမ်းမှအဲလ်ဘတ်မြစ်ကိုကြည့်ရှုသည့်မီတာ ၅၀ အကွာအဝေး။ လှေကားထစ်ကိုဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်နှင့်အခမ်းအနားကျင်းပသည့်လှေကားထစ်များဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးမြို့၏ခံတပ်ဟောင်းများဖြစ်သောရိုးတံများမှစတင်သည်။ ဤအရာအလုံးစုံ၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ဥယျာဉ်အနည်းငယ်သာကျန်ရှိသည်။
Albertinum တော်ဝင်ပန်းပုလက်ရာများစုဆောင်းထားသောနေရာကိုဖော်ပြပြီး၎င်းသည်ကျန်ရှိနေသောကျန်ရှိနေသေးသောနေရာဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ခေတ်တွင် ၁၉ ရာစုမှရရှိသောအနုပညာနှင့်ပြတိုက်အသစ်နှင့် Impressionism ၏လက်ရာများလည်းပါရှိသည်။
La Dresden ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဒါဟာBrühl Terrace ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်, အီတလီ Baroque စတိုင်ရှိပြီး, စစ်ပွဲပြီးနောက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၁၊ ၃၊ ၁၉ ရာစု Saxony ဘုရင်များအပါအ ၀ င် Wettin မိသားစုတွင် ၄၉ ယောက်ရှိသည်။ Silbermann ၏နောက်ဆုံးကျန်ရှိသောကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကိုလည်းထိန်းသိမ်းသည်။
Elbe ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာ၊ Neustadt ၁၇၃၀ မီးလောင်ပြီးနောက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သော Dresden ခရိုင်၏အမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်“ new” neu အတွင်းပိုင်းတွင်အလယ်ခေတ်ခံတပ်များပါဝင်သည်၊ အပြင်ဘက်တွင်အရက်ဆိုင် ၁၅၀ ကျော်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များရှိသည်။ ညဉ့်နှင့်အကောင်းတစ် ဦး အချိန်ရှိသည်။
မင်းကနန်းတော်တွေကိုကြိုက်ရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ် တစ်ရက်ခရီး သိရန်ကီလိုမီတာအနည်းငယ် နွေရာသီနေထိုင်ခွင့် Saxony ၏မဲဆန္ဒရှင်များနှင့်ရှငျဘုရငျ၏။ နန်းတော်သုံးလုံးရှိတယ် Wasserpalais, el Bergpalais နှင့် Neues Palais ။ ယနေ့သူတို့သည်ပရိဘောဂပြတိုက်များ၊ ကြွေထည်များနှင့်အထည်အလိပ်ပြတိုက်များဖြစ်ပြီးလှည့်ပတ်လှည့်လည်ရန်လှပသောဥယျာဉ်ခြံမြေများရှိသည်။
နောက်ဆုံး၊ ဒီဂျာမန်မြို့မှာခရီးသွား discount ည့်လျှော့ဈေးကဒ်ရှိတယ်။ အသုံးဝင်နိုင်တယ် Dresden City Card မြို့အတွင်းရှိမြို့ပြရထားများ၊ လမ်းရထားများ၊ ဘတ်စ်ကားများနှင့်ကူးတို့များရွေ့လျားခြင်းအတွက်မှန်ကန်သည်။ ၎င်းသည်တစ်နေ့၊ နှစ်၊ သုံးရက်၊ တစ်ကိုယ်ရေနှင့်မိသားစုရှိပြီး Regio ဟုခေါ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Alemania » Dresden မှာဘာလုပ်ရမလဲ